“Mbola voahilikilika ny vondrom-piarahamonina misy ahy…” · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraDevy Andreina Grijalva
Voadika ny 03 Jona 2018 4:57 GMT
Devy Andreina Grijalva dia mpikambana ao amin'ny Wambra Radio, radiom-piarahamonina iray ao Quito, Ekoadaoro ary manondro tena ho mpikamban'ny vondrom-piarahamonina “sexo-genéricas”. Izao manaraka izao dia dika an-tsoratra amin'ny lahatsary famakafakan'ny Devy amin'ny zavontenin'ny voambolana, “transexual” (trans).
Ireo tena manjaka avy amin'ny lahatsoratra nivoaka tanelanelan'ny Janoary 2017 sy Avrily 2018 nanonona ny “transexual” (lahatsoratra 143) tao amin'ny angona Media Cloud roa ao amin'ny sehatra fampitam-baovao miteny espaniola ao Ekoadaoro. (Jereo sary lehibe kokoa)
Inona ny voambolana ao amin'ny zavonteny nahasarika anao indrindra?
Mbola mahita isika ny voambolana tahaka ny ‘fanavakavahana,’ ‘herisetra,’ sy ny voambolana mirona toy ny ‘tolona’ sy ‘fitsarana an-tendrony.’ Misy ihany koa ny voambolana sasany nanintona ny fifantohako tahaka ny ‘ampiofoana’ na ‘niofo’ na ‘nantsoina’ izay milaza sompirana fa misy ny fiovana.
Araka ny zavonteny, ahoana ny isoloantenan'ny fiarahamonina trans [niova fananahana] ao amin'ny fampitam-baovao?
Tsy mahita isika teny eo amin'ny ambaratongan'ny politikam-bahoaka tahaka ny ‘fanabeazana’, ‘fahasalamana’, ‘asa’, ary mbola vitsy kokoa rehefa manoritra ny ‘fiainana tsara,’ ‘tombontsoa’, ‘fahatontosana’ na ‘fiainana ampoka’ avy amin'ny trans. Tsy mety hita ao amin'ny voambolana nampidirina ao [amin'ny zavonteny] izany.
Ahoana ary ny tokony isoloantena ny fiarahamonina trans ao amin'ny fampitam-baovao?
Mieritreritra mihitsy aho fa mbola voahilikilika ny vondrom-piarahamonina misy ahy ary tsy mahita anay amin'ny lafiny tsara ry zareo. Izay miiba ihany no aseho eo amin'ny resaka herisetra, fanavakavahana na fahadisoana. Tsy mifantoka amin'ny fandalinana [fahatakarana] na mitondra ohatra velona amin'ny olona trans eo anivon'ny fiarahamonina ny fampitam-baovao.
Inona ny voambolana tokony hananan'ny ‘trans’?
Mihevitra aho fa zava-dehibe tokoa ny fahitana na ny fikatrohana na ny fifandraisana ka ny fomba tokana ahitantsika fitantarana sy fizian'ny olona trans dia ny fampisehoana ny fiainan'ny tsirairay. Samy manana ny fiainany tsy mitovy ny tsirairay. Izany no tokony hovitaina ao amin'ny fiarahamonina, manolotra ho hita ny olona trans amin'ny ohatra tsotra, fijery tsotra, sy ny fomba iasana sy izian'ny olona iray ao amin'ny fiarahamonina.
Ity dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra Rising Frames novolavolaina tamin'ny fiarahamiasa akaiky amin'ny fikambanana El Churo ao Quito, Ekoadaoro. Nikarakara atrikasa natao ny 21 aprily 2018 izy ireo namory hiaraka ao amin'ny toerana iray ireo solontena avy amin'ny vondrona sy fikambanana samihafa mba hanadihady ny fomba isehoan-dry zareo na ny lohahevitra tandrovin-dry zareo ao amin'ny angona media Ekoadaoreana ary hamorona tantara ho setrin'izany fisehoana izany.
Nanatrika tamin'ny fandikana an-tsoratra sy ny fandikanteny, izay nahitsy hazava kokoa sy ho fohy kokoa i Mónica Bonilla.